XOG: AC Milan oo heshiis la gaartey Mateo Musacchio & kharash badan oo ay u qoondaysay suuqa kala iibsiga – Gool FM
XOG: AC Milan oo heshiis la gaartey Mateo Musacchio & kharash badan oo ay u qoondaysay suuqa kala iibsiga
Raage May 3, 2017
(Milano) 03 Maajo 2017 – AC Milan ayaa qarka u saaran inay heshiis 4 sano ah qalinka kula aasto daafaca dhexe ee Villarreal jaalle Mateo Musacchio kaasoo ugu kacaya €18m, sida uu qorayo Sky Sport Italia.
Laacibkan reer Argentina ee caalamiga ah ayaa muddo bartilmaameed u ahaa kooxda Vincenzo Montella, balse waxaa mar kasta dib u dhigayay iibka Milan, oo uu haatan ugu dambayn la wareegay Yonghong Li, balse horay ayaa heshiiskan aasaaska loogu dhigay taasoo ka dhigan in 26 jirkani uu haatan qarka u saaran yahay ka ciyaarista San Siro.
Khabiirka Sky Sport Italia ee Gianluca Di Marzio ayaa ku adkaysanaya in heshiiska intiisa badan lala dhameeyay Villarreal iyadoo lagusoo qaadanayo €18m, iyadoo maalmaha yar ee soo aaddan la dhamayn doono heshiis 4 sanadood ah oo lala gelayo Musacchio, tiiyoo ay jirto in midka uu haatan kula jiro Villareal uu dhacayo Juunyo 2018. Wuxuuna heshiiskan hordhaca ihi ka dhigan yahay in Milan ay faraha ka qaadayso daafca Lazio ee Stefan de Vrij kaasoo ay isku hayteen Inter Milan.
Dhanka kale, wararka uu saaka qorayo La Gazetta dello Sport ayaa sheegaya in AC Milan ay xagaagan aad u geli doonto suuqa kala iibsiga iyadoo u diyaarisay miisaaniyad ka badan 150 milyan oo euro, waxayna durba wada xaajood kula jirtaa dhowr laacib sida Pelegrini iyo Kessie.
Ronaldo oo Taariikh cusub sameeyay...(Aqri rikoodho hor leh uu sameeyay kaddib SADDEXLEYDII xalay)
Cristiano Ronaldo wuxuu gaaray goolashiisii 399 ee Real Madrid ee ma ahan 400....(Ogoow sababta)